အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာ (၄)
12 Responses to “ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာ (၄)”
ပြေးပြေးလွှားလွှားလေးပဲ လာဖတ်ပြီး ပြုံးသွားပါတယ်။ အလုပ်ကလည်းမအား၊ နေလည်း သိပ်မကောင်းလို့ အရောက်နှေးနေရတယ်မချောရေ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အမရေ..။ :)
အမလဲ.. နှုတ်ခမ်းနီရာတွေ သတိထားနော်.. ဟီးဟီး။
အိမ်သာရေမြှပ် နဲ့ တိုးသွားဦးမယ်။ :P
၁။ သူခိုးလက်က သူဝှက်လုဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့။
၂။ ခရီးသည် ကျောချမ်းသွားမှာကို မြင်ယောင်ပြီး ပြုံးမိတယ်။
၁။ သူ့ဆီကို သွားဦးမှပဲ သူ့သမီးကို ခိုးပေးပါလို့..
၂။ ငါသာဆို လက်ကိ်ု ရေခဲပါ ရိုက်ထားတယ်.
၃။ မပြောပဲ တပတ်လောက် အရင်ထားရမှာ..ဟီး
( ဒါက မချော ကိုယ်တွေ့ထင်တယ်။ )
၂။အသုဘယာဉ်မောင်းလာတာ နှစ်ဆွေးနေပေမဲ့ သရဲကြောက်တတ်သေးတယ်။
၃။ဦးရွှေမောင်ကြီးလုပ်ရပ်ကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ ပိုပြီးနှုတ်ခမ်းရာတွေ များလာလောက်တယ်။းဝ( ကန့်လန့်လုပ်တာ ဟုတ်ဘူးနော်အမ။ စဉ်းစားကြည့်တားဝ
Why? Do the Girls like to Kiss so much? I didn't ve gf and i didn't know it.
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးသွားပါတယ်.. :)
ညီမလေးကတော့ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲ ရယ်သွားပါတယ်... :D